Umbukiso uBrian Fuller, Uyeka Ukukhiqizwa Kwezinganekwane Ezimangalisayo ngenxa Yomehluko Wobuciko | Ngivela kwa-mac
Umbukiso uBrian Fuller uyeka ukukhiqizwa kwama-Amazing Tales ngenxa yokwehluka kobuciko
Ezinyangeni ezedlule, sibonile ukuthi i-Apple, ishaye kanjani incwadi yokuhlola, ithola inani elikhulu lamalungelo okuqala ukudala uchungechunge lwayo lokuqala. Ngeshwa nge-Apple, akubona bonke abantu abazimisele ukudlula phezulu futhi kususelwa enanini elikhulu lemali elitshalwa yi-Apple.
Kule mpelasonto, kuqinisekiswe izindaba ukuthi i-JJ Abrams elandelayo yochungechunge ikhethe i-HBO ekwakhiweni kwayo okulandelayo kwethelevishini, ikakhulukazi ngenxa yesipiliyoni sale nkampani, into engeke yathathelwa indawo yimali njengoba ibonakala izama ukwenza.UManzana. Kepha akuyona ukuphela kwembuyiselo. UBrian Fuller, ophethe isizini entsha yama-Amazing Tales, usukile ebhandeni.
Njengoba singafunda ku Izintatheli zaseHollywood, uBrian Fuller akaseyena umbukiso wezindaba ezimangalisayo, elinye lamalungelo abaluleke kakhulu i-Apple elizuzile selokhu aqala uhambo lwakhe emhlabeni wokusakaza. Ngokusobala, umehluko kaBrian Fuller wokudala ube yinkinga engenakunqobeka kuzo zombili izinhlangothi. Lapha sibona ukuthi uJJ Abrams wayazi kanjani ukuthi angatholakalaphi ngochungechunge lwakhe olulandelayo uma ekugcineni ethatha isinqumo sokubheja i-Apple ngokukhiqiza uchungechunge olusha.
UBrian Fuller usanda kushiya ukukhiqizwa kwama-American Gods, ngenxa yesikhangisoumehluko kukho kokubili ukukhiqizwa nesabelomali ebinazo zonke iziqephu zalolu chungechunge ezisakazwa nguStaz futhi okwamanje ziyatholakala ku-Amazon Prime Video. Okunye okuhle kakhulu emsebenzini kaBrian Fuller kwakuwuchungechunge lweHannibal, uchungechunge engiluncomayo kakhulu. Ubuye wasebenza njengombhali wesikrini kuStar Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager, Star Treck: Discovery (okumanje itholakala kuNetflix kusizini yayo yokuqala futhi kunconywe kakhulu), American Gods, Heroes, Pushing Daisies, Dead NjengoMi.noWonderfalls.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » Umbukiso uBrian Fuller uyeka ukukhiqizwa kwama-Amazing Tales ngenxa yokwehluka kobuciko
Ungalikhuphula kanjani inani le-Movement ku-Apple Watch
Izitoko zokuqala ze-HomePod zithengiswe e-United States